zvemagetsi mota mota '
Catalog Of Magetsi Motors
Tsvaga yakanyorwa yeY2 akateedzana mota mota
Y2 akatevedzana magetsi motors inogadzirwa nehunyanzvi hwekuvandudza
Iyo yakazara nzira yemhinduro inoratidza sirogani iyo Regal Beloit zvigadzirwa zviri. Magetsi ese emagetsi anowanikwa mune ino katalog inosangana neakakodzera. Electric motor catalog kubva kuChina mutengesi. INDUSTRIAL CHITATU CHITATU MOTORI MUKUFANANA NEGOST STANDARD, Maindasitiri matatu phase motors zvinoenderana GOSI mureza. Iyo 5AH akateedzana matatu-chikamu squirell-keji induction mota dzinoitirwa kushanda kwenguva refu-mukati me-musuwo dzimba.
Y2 Series Yakakwira Voltage Yakanyanya Kukwira Kwemhando Matatu Electricuction
Izvo zvakakosha kuti mota dzemagetsi dziiswe nevanoziva, vanokwanisa uye vane mvumo vashandi. Inenge zana remakore ekubudirira mu motokari uye kugadzira jenareta. CHINA GOST STANDARD ELECTRIC MOTORS, GOST nhatu nhanhatu dzemagetsi mota ndicho chigadzirwa chitsva icho isu chatinogadzira kumusika weEastern Europe, senge Russia, Ukraine, nezvimwewo zvakajairwa mareferenzi, kupisa kwemagetsi uye kusagadzikana kwemagetsi.
Y2 akatevedzana motors ari muhombekombe eddurate uye fan yakadziyirwa mhando
Vipimo uye zvinobuda zvakateedzana zvekutenderera michina yemagetsi Iyo yakanyatsogadzirirwa musika weEuropean, ane bhokisi rekupedzisira riri pamusoro pe mota. Izvi bhurocha inotsanangura iwo matsva akaenzana epakati-onal kugona makirasi. Iyo huru Mitemo kune yakaderera magetsi mota. ABB inopa mhando mbiri dzepasi voltage induction mota akateedzana. Ma standard induction mota, ayo anoshandiswawo zvakanyanya mumakemikari, mafuta uye gasi maindasitiri, anoratidzwa mune yakasarudzika katarogu.
Tsvaga yakanyorwa yeYeu dzakateyiwa brazi yemagetsi
YJ akateedzana electromagnetic yakavhuna matatu chikamu magetsi mota
China YEJ Series Electromagnetic Brake Matatu Phase Magetsi mota katarogu ye YEJ Alu Matatu Phase akamedura mota, YEJ Matatu Phase Brake Induction Motors. MuEurope, iko kushanda kwesimba kwemagetsi emagetsi epasi.
YJ akateedzera electromagnetic matatu-chikamu asynchronous mota
YDEJ2 dzakatevedzana Electromagnetic brake motors inogadziridzwa zvigadzirwa zveYEJ akateedzana, zvinoenderana nezvinodiwa neJB / T6456. Imcore inyanzvi yemagetsi motor stator uye rotor lamination kugadzira.
Iyo yemagetsi inopesana neye potentiometer inosiyana zvichienderana nemutoro
Kamwe paakaisa iyo swirl flap mota dzimba inodzokororwa inobata bung munzvimbo. BMW 320d Matambudziko Iyo BMW 3 Series ndiyo yakakura kwazvo kutengesa renji. Kubva kuGerman, Bavarian Motor Works - BMW - inogadzira anopfuura mamirioni mota pagore.
Tsvaga Catalog ye DC motors mune yesimbi indasitiri
DC motors anowanzo shandiswa ndeyekushandisa inoda mota kumhanya kugadzirisa
Yedu DC michina inopa yakakura sarudzo yekumisikidza kuronga, kutonhora masisitimu. Uine makore anopfuura zana ane ruzivo mukugadzira mota. DC motors Motors & maJenareta bhurocha Motortecnica uye Service.
2 Kudhiraivha uye kudzora, mota uye mehendi simba rekutumira catalog
Iyi katalog inopa ruzivo rwehunyanzvi nezve DC motors yekushandisa kwemaindasitiri. Main data ndiro iri mune isina simbi uye yakasimbiswa kune mota furemu.
Yepasirose huru kutsvagurudzwa kweye nyowani, yakashandiswa & yakawandisa maindasitiri DCelectric mota zviri kutengeswa. Maindasitiri-giredhi emhepo mota, yakapusa dhizaini, diki saizi, kurema uremu, yakakwira bhiza.
Dzvanya Kuti Unorodha Catalog PDF
Catalogue yeimwe chete chikamu motor iron & aluminium dzimba
General chinangwa chimwe chikamu chikamu motors
Simba rinoita magetsi matatu chikamu squirrel keji induction mota. Imwechete pahse induction mota catalog inobata nema mechanical uye magetsi maficha easynchronous squirrel cage motors. Panyaya ye "resistances", iyo yakakwira magetsi ekupa, inowedzera iyo yazvino. Kwese kuyedza kwatorwa kuve nechokwadi chekuti data rakanyorwa mune ino kataraki rakarurama.
Crompton Greave FHP Imwe Pase Motors Catalog
1) Mhando dzese dziri pamusoro iSingle Phase kunze kweGF 6739. 2) 36 ”fan mota dzinowanikwawo pakukumbira. 3) Yekumhanyisa sarudza switch switch. Makirasi eiyo imwe yekumhanyisa matatu- chikamu keji induction mota. MOTORI DZINOGONESESWA KUBVA KUNYANYA GRADE KUFA CAST ALUMINUM. Zvinopfuura makumi mashanu kubva muzana zvemitero zvakagadzirwa neMagetsi Mota. Matatu-chikamu uye imwechete-chikamu asynchronous magetsi emagetsi, yakanyatsovharwa. Die-cast aluminium alloy, kusanganisa B5 flange yehukuru 160S.
Matatu-chikamu uye kamwe-chikamu asynchronous magetsi emagetsi
Tarisa kuna Cantoni Mota yakazara General Chinangwa Chega Pasika Induction Motors katarogu pane DirectIndustry. Zvese dhizaini, ruzivo uye mifananidzo inoratidzwa mune ino katarogari zvivakwa zveATT Magetsi. ZVAKADUKA VOLTAGE MOTORS MOTOR GUIDE SINGLE PHASE, Mutengo wekutenga mota yemagetsi uye kutyaira, semuenzaniso, ingori 1-3 muzana. Aluminium alloy dzimba dzinoona kurema kurema. Ona musiyano mukuru. Kutanga mashandiro eiyo imwechete-yekumhanyisa matatu-chikamu keji induction mota dzemagetsi ekugovera voltages.
Iron Dzimba Rekugara PDF Catalog
Aluminium Dzimba reParamende PDF
Tsvaga ikopi yenyaya yeAEEF yemagetsi mota
Range remota rakafukidzwa neiyi kabhuku
Chigadzirwa Chigadzirwa AEEF akateedzana mota chikamu-chetatu, chakakomberedzwa zvachose uye fan-yakanyorova mota yemagetsi ne squirrel keji. Kushanda kunoita TECO Motors kugara kwenguva yakareba uye kupa anodhura-mashandiro.
AEEF Series Matanho matatu-Chikamu Magetsi Magetsi
Ichi chinyorwa chinosanganisira technical data yeiyo yakazara renji yemagetsi emagetsi anogadzirwa uye / kana kugoverwa naOmEC. Motors. Nemakore anopfuura zana eruzivo mune dhizaini dhizaini nekushandisa.
Matanho matatu AEEFhorizontal ekunze shaft yemagetsi mota
Isu tiri vane mukurumbira vagadziri uye vatengesi veyt / aeef matatu-chikamu magetsi induction mota imwechete chikamu induction motors muChina. Yakavharwa zvachose uye inotonhorera fan mota yemagetsi ne squirrel cage
Tsvaga ikodhi yekokonati digger yemagetsi mota
China 200W Kokonati Digger AC Imwe Pase Magetsi Magetsi
China 200W Kokonati Digger AC Imwe Phase Magetsi Mota, Tsvaga ruzivo nezveChina Motokari, Magetsi Magetsi kubva ku200W Kokonati Digger AC Imwe Chikamu Chikamu Magetsi Mota.
200W Kokonati Digger AC Imwe Pasi Magetsi Magetsi
200w Kokonati imwechete chikamu induction motaOperating ConditionsChinodzi kupisa. Neal zvakare achave nevanochera uye zvimwe zvibvumirano. Universal Lighting riant inopa magetsi ese aunoda.
Yzb Series Idzva Coconut Digger Motor
Neal zvakare ichava neyake digging uye zvimwe zvibvumirano paCavalcade. Kana tasvika pamibvunzo yako, tinotumira yakafanirwa katarogu, pricelist, kugona coconut shell sando mill · jacques gyratory crusher sale.
Tsvaga ikodhi yemagetsi emagetsi zvikamu
Industrial Motor Kutsiva Zvidimbu Mutengo Catalog
Iyi katarogu inoratidza inonyanyo kumbirwa yekutsiva zvikamu zvechikamu chechitatu, capacitor mhando. Yakatanga sechitoro chekugadzira mota dzemagetsi uye nekufamba kwemakore. Ndokumbira utarise kuburikidza neyedu katarogu.
Kutsiva Zvikamu zvemagetsi Motors uye Pombi
Tora mota yako yekutsiva mota kubva kuGrainger! Tenga masutu emota, mabhureki ekutsiva, matsime emota. Tora Mutengo Wakawanda uye Kutakura Mahara.
Mutengo wekutenga wemagetsi wemagetsi uye dhiraivha
Kupinda mukana nyore kune yedu US MOTORI mazita ezvinyorwa anogona kuwanikwa pano. Tsvaga mabhurocha, madhatashiti & zvimwe zvigadzirwa zvinyorwa zvakare. Kurumidza kuwana zvipenga zvikamu uye nerubatsiro ruzivo rweCopeland Mupumburu compressors.